မည်သည့်ကွန်ပျူတာမှမဆို WhatsApp ဝက်ဘ်ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ Androidsis
အာရုန်သည် Rivas | | Android application များ, လဲ tutorial, Whatsapp
ယခုအချိန်ကြာမြင့်စွာကတည်းက WhatsApp ကမည်သည့်ကွန်ပျူတာကိုမဆို application ကိုအသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုသည် ပရိုဂရမ်ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်စရာမလိုဘဲရိုးရှင်းသောအဆင့်အနည်းငယ်နှင့်လုပ်ဆောင်ပါ။ ဒီ option ရှိခြင်းသည်များစွာသောလူများအတွက်အလွန်အသုံးဝင်သည်။ ၎င်းသည်အခြားအက်ပလီကေးရှင်းများဖြစ်သော Telegram ကဲ့သို့လည်းပေါင်းစပ်ထားသည့်အရာဖြစ်သည်။
ဒါကဖြစ်လိမ့်မည် ဝဘ်အက်ပ်ယခင်ကသင်ပြောခဲ့ပြီးသောအရာ ဤဆောင်ပါး။ အဲဒါကိုဖယ်ထုတ်ပြီးအဲဒါကိုကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အသုံးချမှုပေးချင်ပေမဲ့ အောက်ပါညွှန်ကြားချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့လိုက်နာရမည်။ သူတို့ကအနည်းငယ်နှင့်ရိုးရှင်းပါသည်။ ကြည့်ကြရအောင်!
ပထမဦးဆုံးအနနေဲ့, ငါတို့ဖုန်းနားမှာရှိရမယ် ၎င်းကို WhatstApp ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကို run ရန်၊ အဲဒါမရှိရင်မဖြစ်နိုင်ဘူး
ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ရမည် ကိရိယာမှ app ကိုဖွင့်ပါ နှင့်ညာဘက်အပေါ်ထောင့်တွင်ဒေါင်လိုက်ညှိထားသောအစက်သုံးခု၏သင်္ကေတကိုရှာပါ။ အဲဒီမှာငါတို့ပေး။ ကွဲပြားသောရွေးချယ်မှုငါးခုနှင့် menu တစ်ခုကိုပြသထားသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သတိပြုမိလိမ့်မည်။ အုပ်စုအသစ်, ထုတ်လွှင့်မှုအသစ်, WhatsApp ကိုက်ဘ်, အထူးရေးသားချက်များ y setting များကို။ မင်းတို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေးမယ် WhatsApp ကိုက်ဘ်, တတိယ option ကိုသော။
ထို့နောက် application ၏ QR စာဖတ်သူပေါ်လာမည်။ အလို့ငှာ QR ကုဒ်ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးပါကွန်ပျူတာ၏ browser မှတဆင့် app ၏ဝက်ဘ်စာမျက်နှာကိုကြည့်ရှုရန်လိုသည် ဒီ link ကို.
စာမျက်နှာကိုကွန်ပျူတာပေါ်မှာတင်ပြီးတာနဲ့ဖုန်းပေါ်ရှိ WhatsApp အပလီကေးရှင်းမှစာဖတ်သူမှပြထားတဲ့ QR ကုဒ်ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးသည်။
ဤအရာအားလုံးပြီးသွားပြီ၊ ၎င်းသည်ဝန်တင်ရန်စောင့်ဆိုင်းရုံမျှသာရှိသည်၊ ၎င်းသည်စကားပြောနိုင်သည်၊ အခြေအနေများကိုကြည့်ရှုနိုင်သည်။
အောက်ဖော်ပြပါဗီဒီယိုတွင်ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် Francisco Ruiz သူသည်ဤရိုးရှင်းသောလုပ်ငန်းစဉ်အားလုံးကိုဗီဒီယိုတွင်ရှင်းပြသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်လည်းကျွန်ုပ်တို့ရှင်းပြသည် WhatsApp ကိုမိုဘိုင်းဒေတာလျော့နည်းအောင်လုပ်နည်း, လက်ဟန်အမူအရာဖြင့် WhatsApp မှအဆက်အသွယ်တစ်ခုမှမက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခုကိုမည်သို့ကိုးကားရမည်နည်း, အော်တိုမက်ဆေ့ခ်ျများပေးပို့ဖို့ WhatsApp ကို program ဖို့ဘယ်လို y WhatsApp တွင်အုပ်စုတစ်စုကိုမည်သို့ဖန်တီးရမည်နည်း.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » မည်သည့်ကွန်ပျူတာမှမဆို WhatsApp ဝက်ဘ်ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ